पृथीछक बुढा मगर print
कसैले भन्छ, यो दुई दशक पछिको स्थानिय चुनाव हो। कसैले भन्छ, नेपाल पुनर्संरचना पछिको ऐतिहासिक पहिलो स्थानीय चुनाव हो। खैर जसले जे भनेपनि नेपालमा चुनाव भएको छ। चुनाव भएको पनि १० दिन भन्दा बढी भईसकेको छ तर उप तथा महानगरपालिकाहरुमा मत परिणाम आईसकेको छैन। देश बिदेशमा छरिएर रहेका नेपाली जनले अहिले मत परिणाम कुरेर बसेको छ। अनलाइन मिडियाहरुमा अप्डेट भईरहने परिणामहरु हेरिहेरी पनि थाकिसके। किन यस्तो ढिलासुस्ती?
यसपालीको मत गणनाको गति देख्दा अझै महिनौं लाग्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यो मत गणना सम्भवतः संसारको सवैभन्दा ढिलो मत गणना होला।
दुनियाँ कहाँ देखि कहाँ पुगिसक्यो। यस्तो लाग्छ, हाम्रो देश एउटा छुट्टै निर्जन दुनियाँ हो जसलाई बिज्ञानको गतिले छोईसकेको छैन मानौ। यान्त्रिक युगको शुरूवात भईसककेको छ तर नेपाली समाज अझै यन्त्रलाई मानविय सहयोगकोलागि उपयोग गर्न सकेको छैन। यसलाई बिडम्वना भन्नू पर्छ। अहिले ठुल्ठुला जनसंख्या भएका महानगरहरुमा कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत मत पनि गणना भईसकेको छैन। यी शहरहरु अन्य अल्पबिकशित गाउँहरु जस्तो होइन। कम्तिमा पनि यी शहरहरुमा इभोटिङ सिस्टम अभ्यास गर्न सकेको भए ब्यबहारिक हुने थियो तर नेपाल सरकार र निर्वाचन आयोगले यसवारे ध्यान दिएको छैन। इभोटिङ सिस्टम लागू गरेको भए मत बदर हुने संभावना पनि हुँदैन। अहिले हजारौं हजार मतहरु बदर भएको अबस्था छ।
यस पटकको मत पत्र यस्तो अब्यबहारिक छ कि जसको लम्वाई करिव एक मिटरको हाराहारीमा छ। यसमा आफुले मन परेको दल वा उम्मेदवारको चिन्ह खोज्न हम्मेहम्मे परेको थियो। जति एउटा मतदातालाई बडेमानको मत पत्रमा आफ्नो उम्मेदवारको चिन्ह खोज्नमा हम्मेहम्मे परेको थियो, त्यो भन्दा बढी दिमाग खराव मत गणकहरुलाई भएको छ। बिचराहरु कति थाक्दा होलान। थाकेरै त होला, अचेल मत गणकहरु भुइँमा लम्पसार परि निदाईरहेको अबस्थाका तस्विरहरु सामाजिक संजालहरुमा आईरहेको देख्छौँ।
मत पेटिकाको मत पत्रहरु भुइँमा खन्याईएको छ। वरपर गोलो घेरामा बसि मत गनिरहेकाहरुको अबस्था देख्दा बाल्यकालमा रुमाल लुकाई खेलेको खेलको झझल्को आउँछ। अनि आफैलाई सोध्न मन लाग्छ, हामी कुन युगमा छौँ ?
अचेल मैले त मत परिणाम एक दिन विराएर हेर्न थालेको छु। नत्र हरेक एक एक घण्टामा हेर्न मन लाग्थ्यो। ऐतिहासिक संविधान सभा पछिको पहिलो स्थानिय निर्वाचन अथवा करिव दुई दशक पछिको स्थानिय निर्वाचनको मत परिणामको वारेमा जान्न जो कोहिलाई पनि उत्साहित हुन्छ तर जुन गतिमा मत गणना भईरहेको छ, त्यसले सवैलाई निरास बनाएको छ।
ठिक छ, सरकारले इलेक्ट्रोनिक भोटिङ सिस्टम लागू गर्न नसके पनि कम्सेकम मत गणकहरु थपेर मत परिणाम सिघ्र सार्वजनिक गरेको भए जनतामा यति निरास छाउने थिएन। निर्वाचन आयोगले त्यता ध्यान किन दिइरहेको छैन? बुझि नसक्नु छ।
अहिलेको गतिले हो भने तीन प्रदेशको मत गणना एक महिनामा सकिएला। अझै चार प्रदेशको चुनाव हुनै बाकी छ। त्यसको परिणाम कहिले आउने? यस्तो लागिरहेको छ, सरकार र निर्वाचन आयोग निदाईसकेको छ जस्तो कि मत गन्दागन्दै चुर भएर मत गणकहरु पनि निदाए। यस्तो गति छ मेरो देशको। कछुवाको गति जस्तो। खरायो र कछुवाको कथा पढ्छौँ, ढिलो चालको कछुवाले बाजि मारेको कथा पढ्छौँ। तर कथा जस्तो होइन देश चलाउन। कछुवाले गन्तव्यमा पुग्नको लागि ढिलै भएपनि आफ्नो चाललाई निरन्तरता दियो। तर मेरो देशको गन्तब्य के हो? थाहा छैन। अनि कसरी पुगिन्छ त समृद्धिको उचाईमा? अहिले देशको गन्तव्य भनेको निर्वाचन भयो, यसको परिणामलाई सिघ्र सार्वजनिक गर्नु हो। सवैको ध्यान जावस।
प्रकाशित मिति: बुधबार, जेठ १०, २०७४ २१:१५:५४